fanontaniana joestick adaptatera
2 taona 4 herinandro lasa izay #56 by ferdiwi
Miarahaba misy adaptatera hanova joestick avy 15 kely ny USB adaptatera .i manana Microsoft lafiny winder Ary ny tonga lafatra àry aho, tena mila mahafantatra misy vahaolana ho an'ny aho nanandrana ny hafa joestick USB fa tsy mitovy fisaorana ho an'ny rehetra
2 taona 4 herinandro lasa izay #57 by rikoooo
Mihevitra aho fa izany dia tokony hiasa ho anao https://www.amazon.com/GamePort-Converter-Adapter-Joysticks-Controller-Steering/dp/B00FDOBVZG
2 taona 4 herinandro lasa izay #58 by rikoooo
Ny hadisoana, dia toa tsy misy mifanaraka amin'ny Microsoft adaptatera SideWinder, izany no tsy maintsy ho joystick manokana
2 taona 3 herinandro lasa izay - 2 taona 3 herinandro lasa izay #76 by Gh0stRider203
(MAINTSY hanova araka ny tsy tia avy hatrany an'ireo ny rohy Ebay ...)
Araka ny zavatra aho namaky ity kofehy, araka ny Malahelo Ahy .... Mety hiafara voatery hividy iray manontolo tehina vaovao
Manokana, aho fahazoan-dalana hidirana ny Saitek X45. Na dia be taona modely Hazokely & throttle, aho efa mampiasa azy io nandritra ny taona maro, ary tena tia azy aho. Marina fa ny ankamaroan 'ny manidina no atao any jumbos, nahita aho fa ho lehibe fotsiny ny karazana fiaramanidina. Ianao efa nahazo betsaka ny bokotra dia afaka fandaharam-potoana sy ny maro Switches HAT (fa na dia tsy mamela ny fampiasana fitendry). - 1st rohy
Ny mora indrindra dia hita ao amin'ny Amazon dia $ 89.99 + $ 7.49 fandefasana. Ebay dia tsy ao amin'ny $ LOT 24.99, + $ 10.shipping fa tsy ho voatanisa fa be intsony. Ity iray ity ihany anefa no tapa-kazo & throttle. Tsy misy boky, tsy misy kapila. - Ebay zavatra 322399578359
Izaho dia mahita izay dia kely kokoa ao amin'ny $ 55 amin'ny Ebay izay manana ny zava-drehetra. Throttle, tapa-kazo, boky (izay tsy nahazo btw LOL), ary ny CD ho azy. (3rd rohy) Oh, ary maimaim-poana ny fandefasana. - Ebay Item 222389050446
Manantena aho dia manampy, ary Miala tsiny ianao mandalo izany!
Fanovana farany: 2 taona 3 herinandro lasa izay Gh0stRider203.
Fotoana mamorona pejy: 0.238 segondra